Waa'ee dhimma eegdoota Jawaar hanga ammaa maal beekna? - BBC News Afaan Oromoo
Turtii waggoota 13 booda gara biyyaatti deebi'e roogeessa, xiinxalaa siyaasaa fi daarektarri OMN Jawaar Mohaammad, erga biyyatti deebi'ee kaasee ''eegumsa mootummaan ramadeefin'' eegumsa argachaa jiraachuu ibsa.
Haatahu malee maxxansaalee miidiyaa hawaasaa halkan [Kibxata] keessa barreesseen eegdonni dhuunfaasaa gadhiisaa akka jedhaman, waraabbii sagalee dabalee maxxanseera.
Akka inni jedhutti ''Duras an hin gaafanne ofiif ramadan, haa fudhatan,'' jedheera.
''Garuu halkan qixxee kanaan deemaa jechuuf maal yaadaniiti? Na sodaachisuuf? Sun hin danda'amuu dhiisaa,'' jechuun barreesseera.
Waahee taatee kanaa yoo ibsu ''Osoo Jawaaritti hin himne meeshaa keessan qabadhaa luuxaa bahaa [konkolaataan] alatti isin eega,'' jedhamuu isaanii barreesseera.
Maxxansaalee Afaan Oromoo, Amaaraa fi Ingiliziin barreeffaman alatti, waraabbiin sagalee ajajaan maqaan isaanii ''Komaandar Indaalee'' jedhamee bilbila waraabame irratti mullatu waliin taasifames ni dhagahama.
Ajajaaan ''Komaandar Indaalee'' jedhaman kun itti gaafatamummaa isaanii ammaaf adda baasuu hin dandeenye kun, namoota eegdotadha jedhaman kanaan ''Ajaja fudhadhaa'' jechuun irra deddeebiin wayita dubbatan dhagahamu.
''Bahaa isin gahe'' jedhanis ajaja dabarsaniiru.
Namni eegaadha jedhame kunis ''Nama otoo bakka hin buusin akkamiin bahaa nuun jettan? Eenyu haa eegu namicha kana? Lubbuu namaa eenyuutti gannee baana?'' jechuun komaandarichaaf deebiseeraaf.
Akka Jawaar jedhutti komaandaricha bira bilbiluunis wayita gaafatu ''ajajaan kun boo'aa, ajaja naa kennameen hordofaa jira naan jedhe. Nama ajaja dabarsees natti himeera,'' jedha.
Halkanii kaasee haga ganamaatti [Roobii] naannoo mana jireenyasaa Finfinnee naannawa Booleetti argamutti, ''humni hidhataa hedduun bobba'ee jira'' jechuunis barreesseera.
Eegdonni kun maaliif akka gadhiisan gaafataman?
Dhimmichi haga ammaa maaliif akka tahe baramuu baatuus, Jawaar eegdonni akka gadhiifaman erga godhamee booda ''namoota siiviilii narratti bobbaasuun, gareen akka haleelame fakkeessuuf kana godhan,'' jedheera.
Jawaar waahee dhimmichaa qulqulleeffachuufis aangawoota mootummaa biratti bilbiluus deebii akka hin arganne dubbata.
''Yoo na hidhuudhaa barbaadanis na waamuu yookaan ammoo ajaja mana murtii baasuun, poolisiin na fudhachuu danda'a,'' jedha Jawaar.
Dargaggoota naannoo mana jireenyaa Jawaaritti
Miidiyaan OMN akka gabaaseetti, ''qeerroofi qarreen Finfinneefi naanooshee irraa walitti babahan kumaatamaan lakkaa'aman alkaniin bahanii bakka Jawaar jiraatuutti waliitti qabamanii aariisaanii ibsaniiru''.
Dargaggoonni OMN dubbise waan jedhan ''balaa kamiyyuu Jawaar irra akka gahu hin hayyeemnu''.
Akka gabaasa miidiyaa kanaatti dargaggoonni naannoo mana jireenyaa Jawaaritti walitti qabamanii sagalee ol ka'een dhaadannoo dhageessisaa turan.
Hiriira mormii magaalota garagaraatti
Gama biraatiin, taatee kana hordofee hiriirri mormii magaalota Oromiyaa garagaraatti adeemsifamaa jira.
Daarektarri Kominikeshiinii komishina poolisii Federaalaa Obbo Jeyilaan Abdii dhimma beekamtii Jawaar malee alkan eegdoota isaa kaasuuf jedhamuufi waan amma jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii yoo kennan, hanga ammaatti ragaa ifatti isaan qaqqabe akka hinjirre himuun, qulqulleeffachaa jiraachuufi ragaa akkuma argataniin deebii akka kennan BBC'tti himaniiru.
Xiinxalaa siyaasaa, rogeessaa fi daarektarri Oromiyaa Miidiyaa Neetiwork (OMN) Aabba Jawaar Mohaammad "Ani hunda dura Oromoodha" ykn 'I am Oromo first' yaada jedhuun hordoftoota hedduu horate.
Rifarandamii Sidaamaa: Abdii fi Yaaddoo
Aanga'oonni TPLF MM Abiy waliin maal mari'atan?
Manni Adoolfi Hiitiler buufata poolisii tahuuf
Firaansitti dubartiin ulfaa sarootaan ciniinamtee duute
'Bu’aan rifarandamii kan fedhe ta'us, waliin jireenyi uummattootaa itti fufa'
'Paartiin Badhaadhummaa pirezidantii malee dura taa'aa hin qabu'
Dubartiin dhalootaan dhiira turte himannaa mana murtii mo'atte